Iran oo tijaabiyey gantaal setalite ah & Maraykanka oo ka carooday (Daawo Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Iran oo tijaabiyey gantaal setalite ah & Maraykanka oo ka carooday (Daawo Sawirro)
A warsame 28 July 2017
Iiran ayaa sheegtay inay ku guulaysatay tijaabada gantaala awood u leh inuu hawada u xanbaaro satellitka.
Talaabadan ayaa ku soo beegantay maalmo ka dib markii Maraykanka ay Iiraan ku soo rogeen cunaqabatayn dhaqaale taasoo la xiriirta barnaamijkeeda gantaalada balastikada.
Gantaalkani ayaa laga riday saldhiga cusub ee lagu magacaabo Semnan oo ku yaala woqooyiga Iiraan, iyadoo dowladda Maraykanka ayaa canbaaraysay tijaabadani cusub waxa ayna ku tilmaamtay fal daandaansi ah.
Waa markii seddaxaad tan iyo 2009 oo ay Iiraan tijaabinayso gantaalada nooca satellitka oo lagu hagaajiyay gudaha Iran.
Telefishinka Qaranka ee Iiraan ayaa sheegay in gantaalkani uu hawada u diri karo 250 kiilo garaam oo satellite ah uuna gaari karo 500 kiilo mitir.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Heather Nauert ayaa sheegay in haddii la xaqiijiyo ay tijaabadani noqon doonto mid jabisay qaraarkii golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey.
Russia and Morocco ratify Extradition convention